Michal Bieganski dia miloka amin'ny tsy fahamendrehana amin'ny ampahany amin'ny sariny | Famoronana an-tserasera
Saripika azo antoka nataon'i Michal Bieganski
Michal Bieganski dia talen'ny nonina tao Sarajevo ary asehony amintsika ny tsy fahazoana miaina miaina an'ity andiana sary ity izay mitondra anay alohan'ny andalana manaitra sy manazava.
Ny fakantsariny dia nanampy azy hatramin'ny fahazazany hahita ny taona naha-izy azy fitaovana lehibe amin'ny fampiharana ny fahitana kanto anao, ankoatry ny fanompoana antontan-taratasy momba ny zava-mitranga ao amin'ny fianakaviana sy ny fotoana niarahany niarahany tamin'ireo namany tamin'ny taonan'ny fahatanorana. Ankehitriny dia asehony antsika io fahitana io miaraka amin'ireo sary tsy dia misy dikany loatra.
Miaraka amin'ny mozika ho toy ny iray amin'ny fitiavany lehibe hafa dia nitendry amponga izy, nanomboka ny fianarany sarimihetsika tao amin'ny University of Lodz. Tamin'ny taona 2007 dia nanomboka naka ny fakantsariny izy handraikitra ireo rindran-kira mozika izay nanjary matihanina ary nanompo azy noho io fomba manokana io hanehoana ny fahitany ny tontolo manodidina azy.
Sangan'asa izay ahitantsika singa manokana manokana afangaro ny fitenenana sy ny entity anao manokana hanao retoucha sary izay mitarika antsika hanana effets optique sy ilusions. Fotoana kely azony tamin'ny fakantsariny ary manome kintana amin'ny idealy sasany momba ny fiainany manokana.
Tsy vitan'ny hoe mitady surrealism fotsiny izy fa manana karazana sary hafa koa toa ny horonantsary mozika toa ireo izay hitanao avy amin'ny tranokalany manokana ary mitondra antsika any amin'ny lalana hafa. Eto no angoninay ny sasany amin'ireny sary bebe kokoa mankany amin'ny surrealism izay mametraka antsika alohan'ny sary tena izy ary tena mamorona toa an'io fitaratra napetraka eo amin'ny vata io izay hisehoan'ny tarehin-tarehin-vehivavy hita taratra izay tsy ahasakanan'ny tanana azy tsy hanohy hijery ny mpijery.
Una andian-tsary izay anananao ao amin'ny tranonkalanao manokana avy amin'ity rohy ity. Manana an'i Flora Borsi ianao ho mpanakanto iray hafa amin'ny sary izay miaro ny tsy fahaleovan-tena miaraka amin'ny karazana famaranana hafa avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Saripika azo antoka nataon'i Michal Bieganski